Sounds that can't hear and Thoughts that can't see: ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပေးရန် ကြွေးမြီ ၃.၇၂ ဘီလျံလျှော်ပြီ
Yin Sue | 7:56 AM | Breaking News
Myanmar President U Thein Sein sits next to Japan Prime Minister Yoshihiko Noda in Japan-Mekong summit in Tokyo April 21, 2012.
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပေးဆပ်ရန်ရှိသည့် ကြွေးမြီ ကန်ဒေါ်လာ ၃.၇၂ ဘီလျံကိုလျှော်ပစ်လိုက်ပြီး နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပေးသွားရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ သဘောတူလိုက်ကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာန၏ ဖေါ်ပြချက် အရသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်မှုများ ဘက်အသီးသီးတွင် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိခြင်းကို ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကြွေးမြီများအား လျှော်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ ဂျပန်-မြန်မာ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုကိုလည်း တိုးမြှင့်သွားမည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကို နိုဒ က ပြောကြားကြောင်း ယင်းသတင်းတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ယမန်နေ့မှ စတင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး ယခုလို ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တဦးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်တို့ ၂၈ နှစ်အကြာကာလအတွင်းပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဆုံမှုလည်း ဖြစ်ကာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကြာ အထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအား ယင်းအဖြစ်မှ အဆုံးသတ်စေမည့် နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတလှမ်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံခြား သတင်းမီဒီယာများ ကဖေါ်ပြကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပြန်ဆပ်ရန် ရှိသည့် ချေးငွေနှင့် အတိုးစုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၄.၉ ဘီလျံအနက် ၃.၇၂ ဘီလျံကို လျှော်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်း ကြွေးမြီ ၃.၇၂ ဘီလျံမှာ မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးယူထားသည့် ကြွေးမြီများဖြစ်သည်။ ။
Note - သစ်ထူးလွင် ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
Posted by Yin Sue at 7:56 AM
ချစ်စံအိမ် April 21, 2012 at 10:40 AM
နွေလ April 21, 2012 at 7:49 PM
မင်္ဂလာသတင်းပဲ အစ်ကိုရေ . . .
မြန်မာပြည်ကြီး ဒီထက်မက တိုးတက်ပါစေဗျာ
Ko Zar Ni Hein - Untitled Album - 12
Vote Myanmar's President U Thein Sein for the 201...
Ko Zar Ni Hein - Untitled - 13
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Karaweik Royal Ba...
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Uppatasanti Pago...
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Shwedagon Pagoda
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Vineyard @ Aye Th...
U Myint Aung (iTSTAR) - Wall Photos - Bagan Myanma...
ကျွန်တော့ မဟေသီ - ၃
U Myint Aung(iTSTAR) - Wal Photos - Taung Gyi Shan...
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Shwedagon Pagoda ...
Ko Aung Pyae Soe - My Eyes on Bagan - Early Mornin...
၀ိုင်ဝိုင်း - မင်းအတွက်ကိုပျော်မှာပါ
The 100 Most Influential People In The World (Full...
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Pine Woods Kalaw ...
U Swe Naingsis - ဖိုးတောင်သူတဲ
Walk off the Earth - Somebody That I Used To Know(...
Gotye - Somebody That I Used To Know ( Ft - Kimbra...
Gotye - Somebody That I Used To Know .Ft - Kimbra ...
Ko Kyaw Zaw Lay - အောင်ပန်းမြို့ - 1
U Swe Naingsis - ချစ်သူအဆင်ပြေပါစေ..
U Swe Naingsis